Imba yeshiri Ryningen | Shanyira Hultsfred
Imba yeshiri Ryningen
musha » Ona & ita » Zvinokwezva vashanyi » Zvisikwa zvisikwa » Imba yeshiri Ryningen
Ryningen ndiyo imwe yenzvimbo hombe, dzinonzi madambwe ekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSweden. Iyo inosvika mahekita mazana matatu enzvimbo iri pamuganhu pakati peHultsfred neHögsby Municipality uko kune shiri dzakawanda dzinoonekwa. Nzvimbo yacho inowanikwa nyore neshongwe mbiri shongwe, chikuva, kupaka nzvimbo, nzira uye zviratidzo zvemashoko.
Nzvimbo iyi yaimbove nenzvimbo dzakakura dzemvura uko Emån nedzimwe nzira dzemvura dzimwe nguva dzaizadza mafashamo echisikigo, uko furawa yechando yaiunganidzirwa mhuka muzhizha. Kubudikidza nekudzikiswa kweLake Ryningen muna 1887, zvese zvinorimwa ivhu nenzvimbo dzehuswa dzakasikwa. Nguva pfupi yadarika matangi akagadzira ivhu risingaperi rinorimwa munzvimbo dzekunze.
Iyo yanhasi yemvura yakaoma yakaoma padhuze neEmån inotongwa ne approx. Mahekita mazana maviri emafuro akanyorova anosanganisira kuchena kwebhuruu uye makati, ayo achiri kunzi achibatsirwa nechirauro uye kune imwe nhanho yekucheka. Idzo nzvimbo dziri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva ndidzo dzakanyanya kuwanda uko kune willow shrubbery uye kunyange reedbeds dzakapararira. Makore Emån anofashamira aimbove matoro anopa tarisiro kumashure kune iyo nzvimbo yese yaimbove yakaratidzwa naEnnn.
Masango masango akakomberedza ivhu rakavhurika naEmnn ​​ane hunhu uye hwakasanganiswa hunhu musango. Masango anodzorwa neAspen anowanzo sanganiswa nemuouki anowanzoitika munzvimbo uye kunyanya miouki yakare inoitika kuRyningsnäs kuchamhembe.
Kuwedzera pakuve yakasarudzika shiri nzvimbo tsvene, kune zvakare huwandu hwakawanda hwezvipembenene zvisingawanzo munzvimbo.
Ryningen inorondedzerwa senzvimbo yeNatura 2000 uye yakadzoreredzwa muma1990 apo maketeni emiti nemakwenzi akabviswa. Uyezve, nyeredzi mafuro uye mhuka dzinofudza dzaive dzakatenderedzwa-dzakasungwa uye dzakaburitswa pamafuro, izvo zvakaita kuti nzvimbo iyi inakidze hupenyu hweshiri.
Pendi nyowani, 570 84 Mörlunda, Sweden
Jenni Leppelt2020-09-25T10:36:29+02:00Shiri dzichiona|
Nzvimbo inochengeterwa shiri yaHulingen
Makamuri ese eshiri